re-subscription ကို SanDisk RescuePRO® Standard နှင့် Deluxe ဆော့ဝဲများအတွက် | Data Recovery
re-subscription ကို SanDisk RescuePRO® Standard နှင့် Deluxe ဆော့ဝဲများအတွက်
နေအိမ် → re-subscription ကို SanDisk RescuePRO® Standard နှင့် Deluxe ဆော့ဝဲများအတွက်
ယင်းကို click ပေးပါ “အခုဝယ်ပါ” အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော button ကို, သင့်ရဲ့ version ကို upgrade သို့မဟုတ်သက်တမ်းတိုးရန်သင်၏ operating system မှလာမယ့် SanDisk RescuePRO® များအတွက်စံ $20:
*Windows ကို® Vista / Win7 / Win8 / Win10
*Mac OS X မှာ® 10.5 သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်
Downgrade: အဆိုပါ Downgrade သင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး Option ကို: SanDisk RescuePRO® စံ. သငျသညျ RescuePRO ကနေအဆင့်နှိမ့်ချင်ပါတယ်®RescuePRO မှ Deluxe®စံ? သငျသညျ RescuePRO သင်စာရင်းသက်တမ်းတိုးဖို့နှင့်အဆင့်နှိမ့်နိုင်ပါတယ်® ထက်ဝက်လက်လီစျေးနှုန်းမှာ standard, သာ $ 20 ရဲ့! အဆင့်နှိမ့်ရန်, အဆိုပါ RescuePRO နျ Standard အဆင့်နှိမ့်မှအထက်လင့်များဝယ်ဖို့နှိပျပါ.
ယင်းကို click ပေးပါ “အခုဝယ်ပါ” အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော button ကို, သင့်ရဲ့ version ကို upgrade သို့မဟုတ်သက်တမ်းတိုးရန်သင်၏ operating system မှလာမယ့် SanDisk RescuePRO® အဘို့ Deluxe $30:
အဆင့်မြှင့်: အဆိုပါ Upgrade လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး Option ကို: SanDisk RescuePRO® Deluxe. သငျသညျ RescuePRO ကနေ upgrade ချင်ပါတယ်® RescuePRO မှနျ Standard®Deluxe? သငျသညျ RescuePRO သင်စာရင်းသက်တမ်းတိုးဖို့နဲ့ upgrade နိုင်ပါတယ်® ထက်ဝက်လက်လီစျေးနှုန်းမှာ Deluxe, သာမယ့် $30! အဆင့်မြှင့်တင်ရန်, အဆိုပါ RescuePRO Deluxe အဆင့်မြှင့်ဖို့အထက်လင့်များဝယ်ဖို့နှိပျပါ.
<div style =”ပြသ:တန်းဝင်ကာစီသည်;”>
<img height =”1″ အကျယ် =”1″ စတိုင် =”border-style:အဘယ်သူအားမျှ;” alt =”” src =”https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/1072639940/?တနျဖိုး = 0&amp;တံဆိပ် = bfH-CIL08gIQxN-8_wM&amp;GUID = ON&amp;ဇာတ်ညွှန်း = 0″/></div>